February 5, 2020 - CeleLove
လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်…
February 5, 2020 CeleLove 0
လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်… လူတစ်ယောက်ဟာ ကံညံ့တော့မယ်ဆိုရင်…. (၁) အရင်ကထက်ပိုပြီး ဒေါသ၊ လောဘ၊ မောဟပိုကြီးလာ တတ်တယ်ပါတယ် ။ အရင်ကထက် ထစ်ခနဲရှိစိတ်တိုနေပြီဆို သတိထားဗျ။ ကံညံ့တော့မယ်လို့ ပြတာပဲ …။ (၂) မကောင်းတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ကောင်းတယ်လို့ မြင်လာတတ်တယ် …။ ဥပမာဗျာ…အရင်က အရက်သိပ်မသောက်ဖြစ်ဘူး […]
အိပ်ရာမဝင်ခင် မိန်းကလေးတိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
အိပ်ရာမဝင်ခင် မိန်းကလေးတိုင်းလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက် (၁) မိတ်ကပ်ဖျက်ပါ။ မိတ်ကပ်ဟာ သင့်ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်ထားပါတယ်။ တစ်နေကုန်လျှောက်သွားတဲ့အခါ မိတ်ကပ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ၊ ပိုးမွှားတွေ ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၂) သွားတိုက်ပါ။ သွားတိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အနည်းဆုံး ၂ မိနစ်ကြာအောင်တိုက်သင့်ပါတယ်။ သွားကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုဟာ […]
သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်းကျင့်မှုဖြစ်ပွား
သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်းကျင့်မှုဖြစ်ပွား မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဗေဒင်ဆရာဆိုသူက ၇ တန်း ကျောင်းသူ(၃)ဦးကို တည်းခိုခန်းသို့ အလှည့်ကျခေါ်ယူပြီး မုဒိန်း ကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် …။ ရောင်းဒေါင်းကျေးရွာ အရှေ့ပိုင်းမှာနေတဲ့ အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ်ရှိသီဟအောင် ဆိုသူ ဗေဒင်ဆရာက သူနဲ့ရည်းစားဖြစ်နေတဲ့ […]
လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယရှီလူနာအမျိုးသမီး(၁)ဦးတွေ့ရှိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သံသယလူနာ ၁ ဦးတွေ့ရှိသောကြောင့် ကုတင် ၂၀၀ ဆေးရုံတွင် စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း သိရပါတယ် …။ အဆိုပါသံသယလူနာမှာ ကချင်ပြည်နယ်မှ လပွတ္တာမြို့နယ်သို့ရောက်ရှိလာကာ ဖျားနားမှုလက္ခဏာ ပြသသောကြောင့် သံသယလူနာအဖြစ်စောင့်ကြည့်ရန် ကျန်းမာရေးဌာနသို့ကျေးရွာဘက်မှ အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ် …။ “ အဲဒီအမျိုးသမီးက […]
ညီညီအောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားတိုက်လို့ဆုံးပြီ ”မြန်မာပြည်က သူ့အဖေနဲ့အမေကို ဆက်သွယ်တာမရလို့ပါ …..
ညီညီအောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားတိုက်လို့ဆုံးပြီ ”မြန်မာပြည်က သူ့အဖေနဲ့အမေကို ဆက်သွယ်တာမရလို့ပါ ….. ညီညီအောင် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကားတိုက်လို့ဆုံးပြီး … ။ မြန်မာပြည်က သူ့အဖေနဲ့အမေကိုဆက်သွယ်တာမရလို့ပါတဲ့ … ။ မြန်မာပြည် ဘားအံ_တောင်ကလေးမှာနေတယ်လိုပြောတယ် … ။ သူ့ဖေကရဲဘော် တမ(၂၂)ကလို့ပြောတယ် … ။ သူ့အဖေအမေနဲ့ […]
ဘီယာသောက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ . . .
ဘီယာသောက်ခြင်းကြောင့် ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ . . . ဘီယာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုကြားတာနဲ့ ဗိုက်ပူပူ ထိပ်ပြောင်ပြောင်တွေကို ပြေးမြင်မိမှာအမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘီယာမှာလည်း တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်… (၁) ဘီယာဟာ ဆံပင်တွေကို သန်မာစေပါတယ် ဘီယာမှာပါဝင်တဲ့ […]
သင့်အသက်ကို ၂ ဆပိုရှည်စေသွားမယ့် နည်းလမ်းကောင်း ( ၈ ) ခု
သင့်အသက်ကို ၂ ဆပိုရှည်စေသွားမယ့် နည်းလမ်းကောင်း ( ၈ ) ခု အသက်ရှည်ရှည်နေလိုပါက ဘာကြောင့် ည၁၀နာရီကနေ မနက်၆နာရီအတွင်း အိပ်စက်သင့်တယ်ဆိုတာကို တရုတ်ဆရာဝန်များ လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်မတို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ ညကိုးနာရီကနေ ၁၁နာရီအတွင်းမှာ ကိုယ်ထဲက အဆိပ်များနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ဖယ်ရှားပါတယ်။အသည်းကတော့ ည၁၁နာရီကနေမနက်၁နာရီအတွင်း ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပြီး အဆုတ်ကတော့ မနက်၃နာရီကနေ၅နာရီအတွင်း […]
ခြင်ဆေးခွေစက်ရုံတွေငိုရမယ့် အစွမ်းထက်ပြီး ငွေမကုန်တဲ့ အိမ်တွင်း ခြင်ကာကွယ်ဆေး
ခြင်ဆေးခွေစက်ရုံတွေငိုရမယ့် အစွမ်းထက်ပြီး ငွေမကုန်တဲ့ အိမ်တွင်း ခြင်ကာကွယ်ဆေး မင်္ဂလာပါ…ခြင်မလာအောင် ခြင်ကာကွယ်တဲ့ ဆေးနည်းကလေး ပေးပါမယ် …။ စပါးလင်အရွက်. လေးညှင်းပွင့် . သံပုရာသီးတို့ကိုရေမြုတ်အောင်ထည့်ပြီးရေတဝက်ရောက်အောင်ပြုတ်ပေးပါ …။(အဖုံးအုပ်ပြီးပြုတ်ပါ) စပါးလင်အရွက်ဖားဖားတစ်ပင် လေးညှင်းပွင့်(၁၀)ပွင့် သံပုရာသီး(၃)လုံးနှုန်း၊ရေ(ရေသန့်ဗူးတဗူးခွဲ)ထည့်ပြုတ်ပြီး အရည်တစ်လီတာနီးနီးအကျန် (ရေသန့်ဗူးတဗူးမပြည့်တပြည့်)ရေတဝက်ကျန် ကပိုကောင်းပါသည် …။ ပြုတ်ပြီးအဖတ်တွေကို ခြင်တွေပေါက်နိုင်တဲ့ ရေဝပ်နေတတ်သော […]
အမျိုးသားတွေအတွက် အသက်ရှည်ဖို့ နည်းလမ်း (၉) မျိုး…
အမျိုးသားတွေအတွက် အသက်ရှည်ဖို့ နည်းလမ်း (၉) မျိုး… Telegraph သတင်းအရ အမျိးသမီးတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် အမျိုးသားများထက် အသက်ပိုရှည်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အသက်၈၃ နှစ်ထိနေနိုင်လျှင် အမျိုးသားကတော့ ၇၉ နှစ်အထိသာ နေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အကွာကြီးတော့ မကွာခြားပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေအရ အမျိုးသမီးတွေမှာ […]
လူတွေမသိသေးတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပဲသွေးဆိုတာ ဘာလဲ( သိအောင် ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ပေးပါအုံးနော် )
လူတွေမသိသေးတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ပဲသွေးဆိုတာ ဘာလဲ( သိအောင် ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ပေးပါအုံးနော် ) အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ဆို ပဲသွေးလေးနဲ့မှ ကြိုက်တာပါဆို ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါ။ ပဲသွေးဟာ စားသင့်တဲ့ အစာတစ်ခုလား …? ပဲသွေး ဟု ဈေးထဲမှာရောင်းနေသော ပစ္စည်းများမှာ ပဲသွေးလဲမဟုတ်၊ ဘဲသွေးလဲမဟုတ်၊ အမဲသွေးသာ ဖြစ်ပါတယ် […]